Izinhlobo - Amakati eNoti | Amakati kaNoti
Lapha uzothola eyodwa uhlu oluphelele lwazo zonke izinhlobo zamanje zamakati. Yazi imvelaphi, umlingiswa, ukuthi kwenzeka kanjani, ikudinga kanjani ukunakekelwa ... nokuningi, okuningi kakhulu ngesilwane sakho osithandayo. Ngaphezu kwalokho, izosebenza njengomhlahlandlela wokukhetha evumelana kangcono nezidingo kanye / noma amasiko omndeni. Sizokwazisa ngezinhlobo ezintsha ezivela ukuze ungaphuthelwa neyodwa. Kujabulele.
Por UMonica sanchez kwenza Unyaka we-1 .
Ikati laseBengal noma ikati laseBengali linoboya obumangalisayo. Ukubukeka kwaso kusikhumbuza kakhulu ingwe; noma kunjalo, akumele ...
Ikati laseHigander lase-cuddly
Por UMonica sanchez kwenza iminyaka 2 .
I-Highlander ibhola elihle futhi elithandekayo loboya elikwazi ukunqoba wonke umndeni ku ...
Ikati lase-York Chocolate, lowo onoboya ofuna ukuba yi-panther
Uma uthanda amakati anoboya obumnyama futhi ungathanda ukuba nawo onoboya ...
I-Russian Blue Cat
Ikati elihlaza okwesibhakabhaka laseRussia, kanye nePheresiya, luhlobo oluhlonipheke kakhulu. Futhi angisho nje okwakhe ...
Uma ufuna i-feline yasekhaya ethandekayo nenothando futhi enkulu kune-European ejwayelekile futhi ebukeka ...
Ikati likaNeva Masquerade liyisibalo esibukeka sinethenda futhi limnandi njengaleli laseSiberia; kusuka…
Ikati lohlobo lwe-Arabian Mau luhlobo oluhle olunoboya bomdabu base-Arabia okuthi, yize kungakabi njalo ...
Yize igama lizwakala lixakile kuwe, impela uma ungumthandi wamakati uzobe uke wabona noma wezwa ngalo ...
Ikati lohlobo lweJavanese luyisilwane esingakholeki esiguquguqukayo ngaphandle kobunzima sokuhlala efulethini ...
Ikati lothando leLaPerm
Uma ungomunye walabo abakujabulela ukuphulula ikati elinezinwele ezisongekile, ngeLaPerm ngeke ube nesithukuthezi, ...
El Abyssinian Ngenye yezinhlobo zamakati ezindala kakhulu ezaziwayo futhi kunokungaqiniseki okuthile ngomlando wawo.
I-Abyssinian ifana namakati ku- IGibhithe lasendulo njengoba kukhonjisiwe kwimidwebo nasekubaziwe. Igama elithi "Abyssinia" alihlobene nomsuka walo, kodwa kubhekwa ukuthi owokuqala wase-Abyssinia ungeniswe kusuka Abyssinia.
Ukukhulunywa okokuqala kwekati lase-Abyssin kutholakala encwadini yaseBrithani ngu UGordon Staples eyanyatheliswa ngo-1874 ihambisana nombala oqoshiwe wekati lase-Abyssinia elafakwa e-UK ekupheleni kwempi.
Kodwa-ke, awekho amarekhodi okuthi amakati angenisiwe evela ku- United Kingdom futhi kukhona abanye namuhla abanombono wokuthi i-Abyssinian yadalwa ngokusebenzisa iziphambano zezinhlanga ezahlukene e-United Kingdom.
Kepha kunezifundo zezazi zofuzo ezikhombisa ukuthi ugu loLwandlekazi i-Indian kanye nezingxenye zeNingizimu-mpumalanga ye-Asia yizindawo okungenzeka ukuthi zivela ekati lase-Abyssinia. Ikati lase-Abyssinia langeniswa eNyakatho Melika lisuka e-United Kingdom ekuqaleni 1900 futhi eminyakeni edlule 1930 Bangeniswa eMelika bevela e-UK.
Umuntu wase-Abyssinia smart, uqaphile futhi esebenzayo, yikati elithanda ukuba matasa. Umuntu wase-Abyssinia uthanda ukuba nabantu, kepha uzimele futhi uzozama ukubusa ekhaya.
Muhle futhi unomzimba wemisipha.
Inamehlo amakhulu amise okwe-alimondi, kepha izindlebe zincane kancane kunokujwayelekile.
Ikati elihle i-Khao Manee
I-Savannah ikati, enkulu kunazo zonke
Ikati eli-orange tabby